Izikhwama ezisekhanda ezenziwe ngemfashini 2015. Yini okufanele ugqoke isiketi esikhishwe ngemfashini ngo-2015, isithombe.
Phakathi kwezimo eziyinhloko zika-2015, umuntu akanakusiza ukuphawula iseli. Izikhwama zokugqoka, amajazi, izibhulu kanye neziketi zingatholakala cishe yonke iqoqo lemfashini ngo-2015. Kodwa okuthakazelisayo kunazo zonke yi-skirt e-checkered - intandokazi engabonakali yemiboniso yamuva. Mayelana nokuthi yisiphi isitayela sezingubo ezibukwe kuzoba okufanele ngo-2015, nokuthi yini okufanele ugqoke isiketi esikhwameni enkathini esikhathini esisha, futhi sizoqhubeka.
Izikhwama ze-checkered skirts 2015: ukubuyekezwa kwezitayela ezidumile
Ake siqale ukubuyekezwa kwethu ngamamodeli nezitayela zezingubo ezihlotshisiwe ezizofaneleka ngo-2015. Ngakho-ke, abakhi bezimfashini abaningi benza amabhethri emikhankeni yobude obude obude. Ukufuna kuyothathwa ngendlela enhle kakhulu futhi kube nemikhankaso emapensele emincane. Ukusika okunama-stylish kanye ne-classic black and gray gage kwenza lezi zinhlobonhlobo zekhredishi ezibukwayo ziphelele. Baphelele ukusebenza ehhovisi, kanye nokuhamba noma usuku. Ngendlela, izibonelo eziningi zezingubo ezibukeziwe zalesi sikwele zinesikhumba esiphezulu - esinye isenzo sika-2015.
Izindwangu ezinde zizophinde zenzeke empeleni. Ubude bawo buhlukahluka kusukela esikebheni eside kunazo zonke kuze kube phansi kuze kube semodeli ehlanganisiwe phakathi kwethole. Ukusika okuthandwa kakhulu kwezingubo ezibukeke zaleli ubude kuyoba yi-trapezoid. Nakuba imfashini izoba yi-maxi skirts ne-asymmetric cut and amamodeli afanelekayo ngenqama ephakeme kakhulu.
Iziketi zezimfashini kunazo zonke 2015: ukubuka kabanzi kwamamodeli wamanje wezingubo ezinde
Mhlawumbe umuntu akanakucabangela isambatho esingaphezu kwesifazane kunesiketi eside. Mhlawumbe kungenxa yalesi sizathu ukuthi ngo-2015 abaklami basebenzise iziketi ezide ezenziwe imfashini ukuze benze izithombe ezicwengile futhi ezinomusa. Futhi ufuna ukwazi ukuthi yiziphi izibonelo zezingubo ezinde ezizosebenza ngo-2015? Bese uqiniseke ukuthi ufunda isihloko sethu.
Unganaki abaqambi nesitayela esithandwa kakhulu - isiketi esifushane esigodini. Ngonyaka ka-2015, imfashini izokwenziwa izikhwama ezishaywe ngesitayela samantombazane esikoleni saseMelika, kanye ne-checkered mini. Ngamamodeli walesi ubude futhi ubuciko obuncibilikisiwe obunqunu.
Uma sikhuluma ngomklamo wombala wefashini, khona-ke umkhuba ukhulu kakhulu kakhulu: u-grey-omnyama, obomvu-omnyama, omnyama nomhlophe, iseli elimhlophe-elimhlophe. Yiqiniso, izixazululo zombala ezingavamile zizofaneleka, isibonelo, iseli eliluhlaza okwesibhakabhaka.
Iziketi zebesifazane eziphathekayo 2015: ukubuka ngokuningiliziwe kwamamodeli wakamuva nemibala
Njalo ukuze uhlale uhlelekile futhi ufake imfashini, ukhuluma ngokukhululekile, lo msebenzi awulula. Ikakhulukazi uma ucabangela iqiniso lokuthi imifashini yefashini emhlabeni jikelele uyashintsha ngokushesha. Ngakho-ke, isibonelo, ngonyaka wezi-2015 umvuthwandaba olandelayo wemfashini wabhekana neziketi zebesifazane. Ngenxa yezixazululo ezintsha zokuklama nezitayela zanamuhla, iziketi ze-retro zabuyela emfashini futhi zahola. Imininingwane eminingi mayelana namamodekhthi wezingubo ezizoba yizintambo zika-2015 ungathola kusuka kusihloko sethu.
Yini okufanele ugqoke i-skirt ye-plaid efashisayo?
Ngonyaka wezi-2015, izitayela zezintandokazi zincoma ukukhetha isiketi esikhombisayo njengesisekelo sezithombe kwisitayela esivamile. Ngakho-ke, ngesikhathi sokushona kwentwasahlobo, isiketi esikhwameni sizoba yinto enhle kakhulu ekugqeni kwesikhumba esinqunyiwe sobude obude, i-cardigan ende ende, isikhwama esifushane sesikhumba.
Uma sikhuluma ngobude, iziketi ezisezingeni eliphansi kufanele zihlanganiswe phezulu phezulu: ijaji elifushane lesikhumba, i-bolero encane, i-sweater encane eboshiwe yobude obude, i-t shirt. Isiketi esikhishwe ngobude obuphakathi bubukeka kahle ngejezi elinomkhono, i-blouse yothando kanye ne-monochrome turtleneck. Uma ukhethe iphethini evulekile ekhishwe emkhatsini wamathole, khona-ke uzogqoka ama-stockings asezingeni eliphezulu. Izesekeli ngendlela ye-beret enhle kakhulu, izikhwama ezinamasosha omfushane, ubuhlalu obukhulu noma ibhande lesikhumba liba yinto enhle kakhulu emikhongweni yobude obuphakathi.
Iziketi eziphathekayo zabafazi abagcwele ngo-2015: ukubuka kabanzi kwamamodeli wakamuva nemibala
Ubani owakuthi ukugcwala kuyisikhathi sokugqoka izinto ezingenangqondo? Njengoba kuboniswe ngemiboniso ye-fashion yakamuva ngo-2015, amakhilogremu angaphezulu ayisona isithiyo endleleni eya kumfanekiso wesitayela. Ikakhulukazi uma phansi komnsalo wakho kuyoba enye yezingubo ezifashisayo zika-2015. Ngamaphi ama-skirts okufanele akhethwe ngabesifazane abagcwele ngo-2015, futhi sizoxoxwa ngakho esihlokweni sethu.
Ngokuhlukahluka okuhlukene kokunqunywa kwesikhumba se-skist i-checkered skirt batusa ukugqoka phezulu. Ngakho-ke, isibonelo, izinto ezilandelayo ze-monophonic zizohambisana: i-turtleneck, ijacket, i-sweater, ijacket, i-blouse. I-stylish kakhulu ibheka isithombe lapho umbala wengxenye engenhla kuvumelana namaseli ase skirt noma eduze kwetoni. Uma uthatha isinqumo sokugqoka phezulu ngesikhala njengomsizi wengubo ye-tartan, qiniseka ukuthi amaphethini afana nosayizi.
Isiketi sogqoke sidinga ukwazi ukuhlanganisa futhi ngezindlela ezihlukahlukene zezicathulo. Uma ingubo yenziwe ngendwangu epholile, bese uhlanganiswa nayo ungagqoka amabhuzu namabhukwana amancane. Ngesikhumba esincane esifakwe ngamapulangwe, ungakhetha amabhuzu amahhafu, amabhuzu anezicathulo eziboshiwe noma izicathulo ezinogwaja ngokugcoba. Uma isikhumba esisegodini sinobunjwa obuhle kakhulu futhi side emadolweni, izicathulo ezinezithende ezinzima, ezithambile ziyoba kuhle kuwo.
Yini ongayigqoka ngonyaka omusha 2016?
Ukuthengwa ngo-2017: yiziphi izinto ezizohlala zifashini ngezinye izinkathi ezimbalwa
Izambatho zebhizinisi kwabesifazane
Izithombe zabafazi ababulalayo
Amamodeli ama-blouses kanye nezingubo ezivela ku-chiffon 2016-2017
Khetha izingubo zokulala nokuphumula
Ukungavumelani komama nengane nge Rh factor
Ukukhetha i-PC Tablet
Ubulili ngemuva kokubeletha
Ama-aromas ngezimpawu ze-zodiac
Ukulungiselela izitsha zokudla zaseMoldovan
Ikhekhe le-Nut ngekhofi ukhilimu
Indlela yokulahlekelwa isisindo ngokushesha ngaphambi konyaka omusha
I-nectarines ene-syomile isiraphu
I-Papaya Salad nge-Peanuts
Mhlawumbe umsebenzi wami ungumama wendlu?
Anemone - ithathwe umoya
I-Edwardian Pumpkin Pie